အတုဥာဏ်ပညာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်များ၏ဒီဇိုင်းပေါ်လာသည် Gadget သတင်း
Juan Luis Arboledas | | Software များ, နည်းပညာ
ယနေ့တိုင်အောင်ပြောဆိုပါ အတုထောက်လှမ်းရေး ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာများအားလုံးသည်အချည်းနှီးသက်သက်မဟုတ်ပါ၊ ဘာသာရပ်တွင်ကျွမ်းကျင်သည့်ကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်၊ ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကွန်ပျူတာလောကမှာအမြင့်ဆုံးပေးရတဲ့အလုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
ဤအချက်များအားလုံးနီးပါးမှအမှန်တရားမှာအတုဥာဏ်ရည်သည်များသောအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကဏ္ all အားလုံးတွင်မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်သည်၊ မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုမသိဘဲသော်လည်းဤ software platform ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအဆင့်တွင်ဤကဏ္sectorsများတွင်သာမကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းကိုသတိပြုသင့်သည် တဖြည်းဖြည်းနဲ့တခြားသိပ္ပံပညာနယ်ပယ်တွေမှာတိုးတက်လာနေပါတယ် ဤကိစ္စတွင်အတွက်အဖြစ် မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး.
1 MIT မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်မူးယစ်ဆေးအသစ်များဖန်တီးနိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်
2 ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်မူးယစ်ဆေးအသစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောဓာတုဗေဒပညာရှင်များအတွက်အလုပ်များစွာကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
ဆေးဝါးကုသမှုကဏ္ facing ရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကပြproblemsနာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုခေါ်နိုင်ပါကမော်လီကျူးအသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်များဖန်တီးရန်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူသည်။ လုံးဝမူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်နှင့်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများတိုးတက်စေရန်လက်ရှိတစ်ခု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဖန်တီးရန်နှစ် ဦး စလုံးအတူတကွအတူတူပင်ကြောင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု။
အခြေခံအားဖြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်မလေ့လာဘဲဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဓာတုဗေဒပညာရှင်များလုပ်ဆောင်သောအရာသည်အလွန်တိကျသောရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်လူသိများသောမော်လီကျူးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏သက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဒီပြီးသားရွေးချယ်ထားမော်လီကျူးအပေါ်တစ် ဦး ကို manual ညှိနှိုင်းမှုတစ်စီးရီးနေကြသည်။ ဝမ်းနည်းစရာ ဒီအလုပ်ကများသောအားဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဓာတုဗေဒပညာရှင်များကြာပါသည် အဘို့, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအလုပ်ပြီးနောက်, မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုမရ။
ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်မူးယစ်ဆေးအသစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောဓာတုဗေဒပညာရှင်များအတွက်အလုပ်များစွာကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဆေးဝါးအသစ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါဓာတုဗေဒပညာရှင်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အနည်းဆုံးယခုအချိန်အထိအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်အတတ်ပညာဆိုင်ရာသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းသည်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံးတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးကတည်းကဤအရာကိုငါဆိုသည်။ မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIT) အလိုအလျောက်သင်ယူမှုစနစ်များကို အသုံးပြု၍ မူးယစ်ဆေးဝါးဒီဇိုင်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲအသစ်နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းနိုင်စွမ်းနိုင်စွမ်း မော်လီကျူးကိုရွေးချယ်ပါ အဘို့အမူးယစ်ဆေး၏လိုချင်သောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံပြီးအချို့သောရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အလားအလာနှင့်အတူ မော်လီကျူးအဆောက်အ ဦ များပြုပြင်မွမ်းမံ ဓာတုဗေဒတရားဝင်ကျန်ရှိနေချိန်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအာနိသင်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ။
၏စကား၌ ရော့ Matheson, MIT ဆရာဝန်
အဆိုပါမော်ဒယ်အခြေခံအားဖြင့် input ကိုမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကနေဒေတာတွေကိုယူ။ တိုက်ရိုက်မော်လီကျူးဂရပ်များဖန်တီး: မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၏အသေးစိတ်ကိုယ်စားပြုမှု, node များအက်တမ်များနှင့်နှောင်ကြိုးကိုယ်စားပြုအနားကိုယ်စားပြုအတူ။ ထိုဂရပ်များကိုသင် 'ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များ' အဖြစ်အသုံးပြုသောခိုင်လုံသောအလုပ်လုပ်သောအုပ်စုများ၏အုပ်စုငယ်များအဖြစ်ခွဲခြားပြီးမော်လီကျူးများကိုပိုမိုတိကျစွာပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ရန်ကူညီသည်။
ဤစီမံကိန်း၏အပျက်သဘောဆောင်သောအပိုင်းမှာ၎င်းသည်ရှေ့တွင်တိုးတက်မှုများစွာကျန်ရှိနေသေးသည့်အလုပ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခြားစနစ်များထက်ပိုမိုထိရောက်သောရလဒ်များရရှိခဲ့သည်ကိုအထူးသဖြင့်အံ့ str စရာကောင်းသည်။ စမ်းသပ်မှုများအတွင်းဖန်တီးခဲ့သောမော်လီကျူးအားလုံးသည်အခြားကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံထားသောပုံစံများဖြစ်သော်လည်း တရားဝင်မှုနှုန်းသည် ၄၃.၅% ရှိသည်။.
၏စကားအရသိရသည် Wengong jin, MIT ၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်ဥာဏ်ရည်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းမှပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » အတုဥာဏ်ပညာသည်မူးယစ်ဆေးအသစ်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်